VLC Player bụ a n'ọtụtụ ebe na ọkpụkpọ na encoder na-akwado ọtụtụ video na ọdịyo formats. Dị ka ndị ọzọ software, VLC ọrụ nwere ike na-enweta dị iche iche ọrụaka nsogbu. Ọ bụ ezie na ọ na-e arụnyere na kọmputa gị ruo ogologo oge nke oge na i tinyeworị ji ya ọtụtụ ugboro, ọ pụrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Otu n'ime ndị nkịtị ọrụaka nsogbu ị pụrụ mgbe mgbe ahụmahụ bụ VLC dịghị ụda. Lee ụzọ ụfọdụ iji nyere gị aka idozi VLC dịghị ụda nsogbu.
Ngwọta 1: Unmute Your VLC Player
Ngwọta 2: Gbanwee Audio Ntọala
Ngwọta 3: tọghata Video Format
Ngwọta 4: ịgbanwee gaa na ọzọ Media Player
Ọ bụrụ na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-akpọ video ma ọ dịghị ụda ebre, puru omume na-akpata bụ na ị nwere ike ka ọ ogbi na ụfọdụ ebe, ma chefuo ihe nile banyere ya. Arụmọrụ kọmputa gị usoro nwere echeta nke a na ntọala ma ogbi VCL oge ọzọ. Iji unmute gị VLC, dị nnọọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
1 Pịa ọkà okwu na akara ngosi (ọ bụ na ala nke gị ọrụ mmanya nso elekere gi);
2 Pịa "igwekota" na ọ bụrụ na gị VCL Player na-agba ọsọ, ọ ga-egosi na igwekota dị ka n'okpuru;
3 Mgbe ahụ unmute VLC na gị ụda na-arụ ọrụ ọzọ
Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ mgbe ị unmute VLC, na-agbalị n'ịgbanwe audio ntọala nke a ọkpụkpọ. Ebe a bụ otú: na-aga Ngwaọrụ> Mmasị> Audio-eme ka n'aka Kwado audio na-ticked. Mgbe ahụ gaa mmepụta ma na-agbalị a dị iche iche ndabara.
Ọ bụrụ na ọ ka na-adịghị arụ ọrụ mgbe na-agbalị ihe ngwọta n'elu, ị nwere ike tọghata mbụ video ọzọ format, n'ihi na VLC nwere ike nwere nsogbu na-akpọ ụfọdụ MKV ma ọ bụ MP4 media faịlụ. Lee, m na-ewebata a dị ike Video Ntụgharị-enyere gị aka tọghata gị media faịlụ. Dị nnọọ na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
1: Download na-agba ọsọ a video Ntụgharị. Mgbe ahụ na-aga "tọghata" tab> "Tinye Files" mbubata gị mgbasa ozi faịlụ. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ gị obodo faịlụ a usoro.
2: wee pịa format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ ma họrọ a format ị chọrọ.
3: See "tọghata" button na-amalite na converting gị mgbasa ozi faịlụ.
Ugbu a, na ị na-abịa gafee ọrụaka nsogbu mgbe eji VLC ọkpụkpọ, gbalịa ọzọ mgbasa ozi ọkpụkpọ? Wondershare Player Nwere ike ịbụ ezi nhọrọ. Ọ bụ a dị ike na-FREE mgbasa ozi ọkpụkpọ ma na-akwado a dịgasị iche iche nke video na ọdịyo formats dị ka AVI, MP4, FLV, MOV, AVCHD, WMV, MKV, M4V, MTS, M2TS, VOB, MP3 na na. Na ya, ị na-adịghị mkpa iji wụnye ọ bụla ọzọ codecs ma ọ bụ ọkpụkpọ na-egwu gị mgbasa ozi faịlụ. Dị nnọọ ịdọrọ-n-dobe gị faịlụ n'ime usoro ihe omume na-enweta na-eme ihe nkiri-dị ka ụtọ. Ugbu a dị nnọọ ibudata a smart media ọkpụkpọ na tufuo manụ ụda nsogbu!
> Resource> VLC> VLC Player Ọ dịghị Sound Ngwọta